I-SEO PowerSuite: Iindlela ezi-5 ezikhawulezayo zokufumana iziphumo zaBanini beSiza abaXakekileyo | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoJuni 18, 2016 NgoMvulo, Oktobha 18, 2021 UAleh Barysevich
Intengiso yedijithali yinkalo yentengiso ongenakuyihoya- kwaye eyona nto iphambili kuyo yi-SEO. Ngokuqinisekileyo uyazi ngempembelelo enokuthi ibe sisicwangciso esihle se-SEO kuhlobo lwakho, kodwa njengomthengisi okanye umnini wesiza, ukugxila kwakho kuhlala kuhlala kwenye indawo, kwaye ukwenza i-SEO ibe yinto ephambili engagungqiyo kunokuba nzima. Isisombululo kukusebenzisa isoftware yentengiso yedijithali eguqukayo, enobutyebi, kunye nesebenzayo.
faka SEO PowerSuite -I-repertoire epheleleyo yezixhobo eziyilelwe ukwandisa i-SEO yakho. Kule posi, siza kutyhila iindlela ezintlanu onokusebenzisa ngazo i-SEO PowerSuite ukonyusa i-SEO yakho yohlobo.
Qiniseka ukuba uyafumaneka
Ukuba ufuna ukuba indawo yakho ifakwe kwisalathiso kwaye ibekwe ngokufanelekileyo, kubalulekile ukuyenza ibe lula kangangoko kuGoogle ukukhasa indawo yakho kwaye ufumane umxholo wayo. Unoko engqondweni, ubume besiza budlala indima ebalulekileyo kwisalathiso. Ngokulula, iiwebhusayithi ezinesakhiwo esisengqiqweni zilula kwiinjini zokukhangela xa zirhubuluza kwaye zibekwe kwinqanaba.
Usebenzisa i-SEO PowerSuite, unokumisela umgangatho wesakhiwo sendawo yakho. Izinto ezahlukeneyo ziya kudlala-umzekelo, amaphepha aphambili kufuneka afikeleleke kwiphepha lasekhaya, kwaye iiposti zebhlog kufuneka zinxibelelane phakathi kwazo xa kufanelekile ngokomxholo. Ungasebenzisa i-SEO PowerSuite's WebSite Auditor ukujonga ezo zinto.
Mane uye kwisixhobo soMphicothi zincwadi kwiWebhu, kwaye ucofe u amaphepha icandelo. Emva koko jonga Amakhonkco angaphakathi aya kwiphepha ikholamu yokuchonga ukuba ngawaphi amaphepha akwindawo yakho angenawo amakhonkco angaphakathi akhomba kuwo.
Oku kuya kukubonelela ngoluhlu lwezithuba kunye namaphepha apho kufuneka ufumane iindlela zokudibanisa kwezinye iindawo zendawo yakho.
Jonga ukuba amaphepha akho abalulekileyo eWebhu aLayisha ngokukhawuleza
Isantya sewebhusayithi sinefuthe elikhulu ekumeni ngenxa yezizathu ezibini:
Isantya sesiza yinto esezingeni, ethetha ukuba iiwebhusayithi ezicothayo ngokubanzi zikwinqanaba eliphantsi.
Isantya sendawo yakho sinefuthe ngqo kwinqanaba lokuncipha.
UGoogle kunye nezinye iinjini zokukhangela zibeka indawo ebalulekileyo ngokubaluleka kumava omsebenzisi. Olunye uphawu olunje linqanaba lokubhabha, elinokuchaphazeleka kakhulu ngesantya sendawo-uninzi lwabantu luya kulinda imizuzwana embalwa (ubukhulu becala) ukuba isayithi ilayishwe ngaphambi kokuba ikhuphe.
Usebenzisa uMphicothi zincwadi weWebhusayithi, ungachonga ukuba ngawaphi amaphepha kwiwebhusayithi yakho alayisha kancinci. Ndwendwela Uphicotho lwephepha Imodyuli yesixhobo soMphicothi zincwadi zeWebhu, kwaye ujonge icandelo lesantya sephepha ukubona ukuba amaphepha akho ayaluphumelela na uvavanyo lwejubane kuGoogle:
Nje ukuba uqaphele ukuba ngawaphi amaphepha alayishwa kancinci, ungathatha amanyathelo ukulungisa imiba.
Jonga umngcipheko wezohlwayo
Amakhonkco akumgangatho osezantsi anokubeka indawo yakho emngciphekweni wesohlwayo kuGoogle, ngokubhekisele kwi-SEO, yeyona nto imbi kakhulu kuwe. Ukuba ufuna ukunqanda isohlwayo esivela kuGoogle, kuya kufuneka ubenakho ukubona amakhonkco ayingozi kwaye uthathe amanyathelo okuwathomalalisa.
kunye SEO PowerSuite kaThixo SEO SpyGlass, unokufumana ngokuzenzekelayo amakhonkco ayingozi kwiprofayile yakho ye-backlink kwaye uthintele isohlwayo sekhonkco kuGoogle.
Konke okufuneka ukwenze kukuya kwisixhobo se-SEO SpyGlass kwaye ufake indawo yesiza sakho. Emva koko, yiya kwiNxulumano yeSigwebo ithebhu kwaye ucofe kwicandelo le-Backlinks, elifumaneka kwicala lasekhohlo. Kulapho, uya kufumana ukufikelela kwizibalo ezibalulekileyo, kubandakanya 'umngcipheko wesohlwayo' sommandla wakho wonke.
Apha ngezantsi kuvavanyo olukhawulezayo lwefayile ye- Martech Zone. Njengoko ubona, akukho nobungozi bePenalty, kwenziwe kakuhle!
Eyona nto ilunge kakhulu, unokujonga umngcipheko wesohlwayo kwiikhonkco zakho ngokucofa kanye. Ke, nokuba yeyamakhonkco ngamanye okanye iqela le-backlinks, ungawubona umngcipheko wesohlwayo ekucofeni iqhosha.
Qhuba uVavanyo lobuhlobo obuSelfowuni
Njengokuba uphendlo lweselfowuni luqala ukuthelekisa inani lokhangelo lwe-desktop, ubuhlobo bobuhlakani ngoku buye baba yinto encinci kuGoogle nakwezinye iinjini zokukhangela. Ngamanye amagama, ukuba indawo yakho ayilungiswanga kwiselfowuni, inokuba nefuthe elibi kubume bakho (ungasathethi ke ngamava omsebenzisi).
Ungasebenzisa uMphicothi zincwadi weWebhusayithi ukwenza uvavanyo oluhambisayo kwisoftware kwiwebhusayithi yakho, ukujonga ukuba iyadlula na imigangatho kaGoogle. Ukuba indawo yakho ayiluphumeleli uvavanyo, uza kufumana iingcebiso zokwenza ukuba indawo yakho isebenze ngakumbi iselfowuni- umzekelo, akufuneki umfundi afune ukusondeza okanye ukuskrolela kwisixhobo esiphathwayo ukuze afunde umxholo wephepha lakho.
Yiya kwi Uphicotho lwendawo Icandelo leSixhobo soMphicothi zincwadi kwiWebhu ukujonga indawo yakho.
Ukuba indawo yakho ayifumani manqaku afanelekileyo, esona sisombululo sisiso kukuyila kwakhona iwebhusayithi yakho ukuze iphendule (ukuba ayikabikho). Utyalo-mali kuyilo - ngakumbi uyilo olusebenziseka lula - lunokuhlawula ingeniso kwiziphumo ze-SEO.
Yenza Uphicotho-zincwadi lweSiza
Kukho imicimbi ebalulekileyo ngewebhusayithi yakho ongayaziyo, okanye awunalo ixesha lokuzifumanisa. Oku kunokuba nefuthe kwigunya lendawo kunye nenqanaba. Nge-SEO PowerSuite, unokufikelela kwizixhobo, ezinje nge Uphicotho lwendawo isixhobo, esinokuthi sichaze ngokuzenzekelayo nayiphi na imiba ephambili kwindawo yakho.
Ukuqhuba uphicotho olucokisekileyo lwesiza, vula usetyenziso loMphicothi zincwadi, kwaye uqalise ukuskena iwebhusayithi yakho usebenzisa ifayile ye- Uphicotho lwendawo isixhobo:
Esi sixhobo sifumanisa ngokuzenzekelayo nayiphi na imiba yezobuchwephesha enokuthi yehlise iireyibhile zakho, ikufundise indlela yokulungisa imiba, kwaye ikwazise malunga naziphi na iingxaki ezikwiphepha. Izinto ezintle kakhulu.
I-SEO inefuthe elikhulu kwi-brand yakho kangangokuba kunzima ukuyityeshela. Nangona kunjalo, ukuba unengxaki yokubeka phambili iphulo lakho le-SEO, jonga i-arhente ye-SEO PowerSuite yezixhobo ezifanelekileyo.
Bahlengahlengisa inkqubo ye-SEO, isenza kube lula kwaye sikhawuleze kuwe ukuba uchonge nayiphi na imiba enokuba nayo indawo yakho, kwaye ekugqibeleni inokukunceda wandise indawo ekuyo indawo yakho.
Usebenzisa i-SEO PowerSuite, unako
Qinisekisa ukuba indawo yakho zilungelelaniswe kakuhle
Jonga ukuba iwebhusayithi yakho imithwalo ngokukhawuleza
Jonga indawo yakho umngcipheko wesohlwayo esingasemva
Qalisa ubuhlobo mobile uvavanyo
Yenza a uphicotho-zincwadi olupheleleyo
Ngokwenyani sithinte nje incam yomkhenkce kweli nqaku, kodwa oku kungasentla kufanelekile ukuba uqhubeke! Unga khuphela i-SEO PowerSuite mahala kwiwebhusayithi yethu esemthethweni.
Khuphela i-SEO PowerSuite yasimahla!
Ukwazisa: Martech Zone isebenzisa its SEO Amandla ikhonkco lokudibana kweli nqaku.
tags: Uphicotho lwe-backlinkumngcipheko wesohlwayo esingasemvaikhonkco lomngciphekoubuhlobo mobileuvavanyo lweselfowuniamandlaenjini yokukhangela nounSEOiphuloseo amandlaisakhiwouphicotho lwendawoUmphicothi zincwadi kwiwebhusayithiisantya sewebhusayithi
Juni 26, 2016 ngo-11: 25 PM
Umhlathi wokuqala ubetha ekhaya ngokwenene. Abanini bamashishini baxakekile beqhuba ishishini kwaye abathengisi bazixakekise ngokugcina amashishini eqhuba. Bonke banemiba engxamisekileyo ekufuneka beyihoye ngamaxesha amaninzi bengabekanga phambili i-SEO. Ukugxila kuyo kunzima ngokwenene kwaye ezi ndlela wabelane ngazo ziluncedo ngokwenene kwabo baye babela ixesha elincinci le-SEO kodwa basafuna amagama abo angundoqo kwizinga leprimiyamu.
Nov 22, 2016 ngo-6:06 AM
Ukugxininisa nje ukuba kubaluleke kangakanani ixesha lokulayisha, xa abantu becofa ikhonkco, baya kulinda malunga nemizuzwana emihlanu ukuba iphepha liboniswe ngokufanelekileyo ngaphambi kokucofa iqhosha elingasemva kwi-browser yabo kwaye bazame inhlanhla ngesinye isiphumo sokukhangela! Gcina indawo yakho ilula kangangoko kwaye ingenaFlash!